Roma (Romaan / Romanian / ROHM; Talyaaniga: Roma Listeni [roːma]; Laatiin: Romaan [roːma]) waa caasimadda Talyaaniga iyo isbahaysi gaar ah (oo lagu magacaabo Comune di Roma Capitale). Rome sidoo kale waxay u adeegtaa caasimadda gobolka Lazio. Iyadoo 2,872,800 qof ay ku nool yihiin 1.285 km2 (496.1 sq mi),  waa sidoo kale wadada ugu badan ee dalka. Waa Midowga Yurub oo ah xadka afaraad ee ugu badan magaalada. Waa bartamaha magaalada Metropolitan ee Rome, oo leh dad ka kooban 4.3 milyan oo qof.  Rome wuxuu ku yaalaa qaybta dhexe ee galbeedka Talyaaniga, ee Lazio (Latium), oo ku yaalla xeebta Tiber. Vatican City waa dal madaxbannaan oo ka mid ah xudduudaha magaalada Rome, tusaalaha kaliya ee jira ee ku yaala magaalo: sidaas darteed Rome badanaa waxaa lagu qeexay caasimadda labada dawladood. Ka dib markii aasaaskii halyayada ee Romulus,  Rome waxaa loo xukumay muddo 244 sano ah nidaam jimicsi ah, oo markii hore asal ahaan ka soo jeeda latansi iyo Sabine, kadibna boqorro Etruscan. Dhaqanku wuxuu u dhiibay toddoba boqor: Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius iyo Tarquinius Superbus.
Rome is located in Earth
Af-Taliyaani : Romano (masculine), Romana (feminine)
Af Ingiriis : Roman
Dhismooyinka Ancient-Imperial-Roman ee Palatine waa meelo isdabajoog ah oo ku yaal Palatine Hill si muuqata u muujinaysa awoodda iyo hanti fardaha laga bilaabo Augustus ilaa qarnigii 4aad. Sanadkii 509-kii BC, Roomaanku waxay ka soo saareen boqorkii ugu danbeeyay magaaladooda waxayna aasaaseen Jamhuuriyaal Oligarchik ah. Rome ayaa markaa bilaabay wakhti ay ku dheehan tahay dhibaatooyinka gudaha ee u dhaxeeya patricians (aristocrats) iyo dadka jecel (kuwa yaryar), iyo dagaal joogto ah oo ka dhan ah dadka ku dhaqan Talyaaniga: Etruscans, Latins, Volsci, Aequi, Marsi. Ka dib markii uu noqday macalin Latitude, Rome wuxuu u horseeday dhowr dagaallo (Gauls, Osci-Samnites iyo gumeysiga Giriigga ee Taranto, oo lala xidhiidhiyay Pyrrhus, Boqorka Epirus), natiijadooduna waxay ahayd qabsashadii Xeebta Talyaaniga, laga soo qaaday bartamaha ilaa Magna Graecia.
Cunto saddexaad iyo qarnigii 2aad waxay arkeen aasaaska Roomaanka Roomaanka ee Badda Mediterranean iyo Bariga, iyada oo loo marey saddexda saddexda Punic Wars (264-146 BC) waxay la dirireen magaalada Carthage iyo sadexdii Wariye ee Macedoniya (212-168 BC) oo ka soo horjeeda Makedoniya. Kadibna waxaa la aasaasay goboladii ugu horreeyay ee Rome: Sicily, Sardinia iyo Corsica, Hispania, Macedonia, Achaea iyo Afrika.
Ilaa bilowgii qarnigii 2aad ee kaddib, awoodda ayaa lagu muransanaa laba kooxood oo ka mid ah aristocrates: guusha, oo ka dhigan qaybta muxaafidka ah ee golaha guurtida, iyo dadweynaha, kuwaas oo ku tiirsanaa caawinta nacaybka (heerka hoose ee magaalada) si ay u helaan awood. Isla muddadaas, kicitaankii beeralayda yaryar iyo aasaasida guryaha hudheelka ee waawayn ayaa ka soo horjeesatay socdaalka magaalada dad badan. Dagaalkii joogtada ahaa wuxuu u baahday ciidan xirfad leh, taas oo aad u daacad u ah guud ahaan jagooyinka ka sarreeya jamhuuriyadda. Sidaa darted, qeybtii dambe ee qarnigii labaad iyo qarnigii koobaad ee qarnigii koobaad waxaa jiray iskahorimaadyo dibedda iyo dibedaba: ka dib markii isku daygii isbeddelka ahaa ee dib u habeynta bulshooyinka ee dadwaynaha Tiberius iyo Gaius Gracchus,  iyo dagaalka ka dhanka ah Jugurta,  waxaa jiray dagaallo sokeeye oo u dhexeeya Gaius Marius iyo Sulla.  Taasina waxay raacday gabadha ugu weyn addoonta ee Spartacus,  ka dibna aasaasida Triumvirate ugu horeysay ee la yiraahdo Caesar, Pompey iyo Crassus 
Faahfaahin Cimilada Rome Ciampino Airport (altitude: 105 m sl, 13 km (8 mi) south-east from Colosseum satellite view)
Roma waa caasimada dalka Talyaaniga.
↑ http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. La keydiyay asal ahaan 13 April 2018. Soo qaatay 14 February 2018. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ Bilancio demografico Anno 2014 (dati provvisori). Provincia: Roma Archived Febraayo 5, 2015 // Wayback Machine Template:Webarchive – Demo.istat.it
↑ (PDF). Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare https://web.archive.org/web/20170727013211/http://clima.meteoam.it/AtlanteClimatico/pdf/(239)Roma%20Ciampino.pdf. Waxaa laga kaydiyay the original (PDF) 27 July 2017. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ https://web.archive.org/web/20170727013115/http://clima.meteoam.it/web_clima_sysman/Clino6190/CLINO239.txt. Waxaa laga kaydiyay the original 27 July 2017. Soo qaatay 13 June 2011. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Roma&oldid=230597"
Last edited on 10 Febraayo 2022, at 16:18
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Febraayo 2022, marka ee eheed 16:18.